उमेरले नेटो काट्दै गएपछि हरेक मानिसमा सिर्जनात्मक कर्मप्रतिको लगाव घट्दै जान्छ । तर, जगतमर्दन थापाको सांगीतिक जीवन–यात्रामा भने यो नियम अझैसम्म लागू हुन सकेको छैन । माघको अन्तिम साता मात्रै ८४ औं वसन्तको सँघार टेकेका वरिष्ठ गायक/गीति–सर्जक थापाले ८४ औं मनाउँदा परम्परागत पूजा–अर्चना, होमादिलाई पछ्याउन चाहेनन् । जीवनको यो पललाई स्मरणीय बनाउन उनले संगीतकै फेर समाते र आफूद्वारा स्वरबद्ध सात गीतको एलबम ल्याए— ‘म मक्किएको धुरी खाँबो ।’
२० को दशकमै गायन क्षेत्रमा पाइला टेकेका थापाले चार दशकजति सरकारी सेवामा व्यस्त रहनुपर्दा संगीत–कर्मलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । तर, वर्षौंदेखि मन–मस्तिष्कमा गढेर बसेको संगीतबाट उनी कसरी टाढा रहन सक्थे र ? अवकाश लिइसकेपछि उनले संगीतलाई निरन्तर पछ्याउन थाले र त्यसकै प्रतिफलस्वरूप २०५८ सालयता उनका पाँचवटा गीति–एल्बम आइसकेका छन् । अब छैटौं एल्बमको तयारीमा जुटेका छन् उनी । पुन: संगीत कर्ममै फर्किएपछि सफलताको शिखर चढ्न उनले आफ्नो कलामा निखार ल्याउन अथक मेहनत गरे । शास्त्रीय संगीतको प्राज्ञिक/आभ्यासिक ज्ञान लिए । हरेक दिन स्वराभ्यासमा आफूलाई तल्लीन तुल्याए । अचेल पनि उनको हरेक बिहान स्वराभ्यासमै बित्ने गर्छ र नयाँ ऊर्जा र जाँगर मौजुद छन् उत्तिकै । ८४ वर्षमा देखिएको उनको जाँगर कुनै युवा सर्जकका भन्दा कम देखिँदैन ।
‘म मक्किएको धुरी खाँबो’ मा नेपाली संगीत क्षेत्रमा लामो समयदेखि भिजेका संगीत–साधकहरूका संगीत र गीत–लेखनमा अग्रदस्तामा रहेका स्रष्टाहरूका शब्दमा उनले कण्ठ खुलाएका छन् । संगीत–साधक भीम विरागले संगीत दिए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रतिभाको स्वरमा नसजिएको ‘फेरि साथ मेरै’ देखि शक्ति बल्लभ, मनोहर सुनाम, रूपक शाही ‘समुदा’, कल्याण सिंहका संगीतमा उनले गाएका छन् ।
गीति–सर्जकहरू रत्नशमशेर थापा, सहदेव ढुंगाना, विवश बस्ती, हर्क साउद, वसन्त वित्यासी थापा र तुलाराम थापाका शब्दहरूमा उनले स्वर अर्पण गरेका छन् । युवा पुस्ताका गायक दीपेश किशोर भट्टराई र जुनु गौतमले केही गीतमा उनलाई सघाएका छन् । थापाको गायन–विशेषता केमा देखिन्छ भने गम्भीर, भावुक र रोमान्टिक शब्दहरूमा उनले उत्तिकै तन्मयतापूर्वक स्वर दिएका छन् । उनको स्वरमा अन्तरनिहित गहिराइ र फैलावटले संगीतका गम्भीर पारखीहरूलाई मुग्ध तुल्याउनेमा दुईमत देखिँदैन ।
चर्चित हुने चाहना कसलाई हुँदैन र ? क्षणिक नै सही तर चर्चित हुनैपर्ने हुट्हुटीमा बाँचिरहेका छन्, अधिकांश साधक । त्यही कारण हामीकहाँ चर्चित हुनकै निम्ति अर्थहीन र हल्काफुल्का शब्द–संगीतमा रमाउने सर्जकहरूको पंक्ति लम्बिँदै छ । तर, थापाले भने शब्द–चयनदेखि संगीत–रचनामा समेत अर्थहीनता र हलुकापनलाई कहिल्यै स्थान दिएनन् । गायनयात्राको सुरुवातदेखि नै उनले कुनै पनि गीत–संगीतमा माधुर्य र गीतात्मकताले धेरै अर्थ राख्छ भन्ने यथार्थलाई स्विकार्दै आए र अहिलेसम्म त्यही मान्यतामा अडिग छन् । उनको सांगीतिक–यात्रालाई सघाउन उनका सुपुत्र मोहित मर्दन थापाले टेको दिइरहेका छन् र अघिल्ला चार एल्बमका जस्तै पाँचौं गीति–एलबमको निर्माता पनि मोहित नै हुन् ।